Apple inovandudza "Carpool Karaoke" uye pachave nemwaka wechipiri | Ndinobva mac
Mushure mekubudirira kwemwaka wekutanga, Apple inoita kunge iri kubheja zvakanyanya pane zvayo zvirimo mugore rino 2018 uye iri kuzviratidza mazuva ese. Pakati peakakosha-akawedzera masevhisi iwo akateedzana anopihwa paApple Music. Mumwe wavo, mumwe wekutanga kubuda muchiedza muna 2017, ndiye Carpool Karaoke, iyo yakaunganidza kugamuchirwa kukuru nevanyori vechiratidzo uye ndeimwe yeakateedzana anonyanya kuteverwa nevatengi vebasa rekubhadhara rekambani.
Nechikonzero ichi, nhasi tinodzokorora nhau yenyaya iyo, mushure mekufona kwakaitwa kwakamisa nhepfenyuro dzakasiyana mukubatana nemumiriri weCBS (kambani yekugadzira chirongwa), Izvo zvakasimbiswa kuti iyo showa ichave neinenge mwaka wechipiri mwaka.
Sezvo isu tatoziva, "Carpool Karaoke: Iyo Series" inongowanikwa kune vanyori veApple Music, uye chirongwa ichi chakanangana nekubvunzurudzwa kunoitwa mumota ine vanhu vane hunhu hwemimhanzi, vangave vaimbi, vanyori, vatungamiriri, vatambi vane mukurumbira, vatambi, nezvimwe, mune inonakidza kwazvo inesimba uye nekubata kwakawanda kwekuseka, kugadzira nguva dzose inongedzera kunharaunda yemimhanzi.
Pakati pevanhu vakakurumbira vechikamu chekutanga izvo zvakapera gore rapfuura, vanhu vane mukurumbira saAlicia Keys, John Legend, Shaquille O'Neal, John Cena, Lebron James naWill Smith vanobuda pachena.
Kunyangwe isu tisati taziva chero chinhu nezve izvo zvichaunzwa mwaka wechipiri, nekuti ivo havana kana kutanga kutora firimu, uye nekudaro hapana mazuva ekuburitswa zviri pamutemo kana chero chinhu chakadai, tinovimba kuti mumwedzi iyi Apple ichaburitsa mwenje uye kujekesa unozove mwaka mutsva wechirongwa chitsva chakapihwa naJames Corden.
Mukuyedza kupinda mumusika wemavhidhiyo nekuona, Apple iri kuisa zvese zvainoita kuwana nzvimbo pakakwirira kwema greats seNetflix kana HBO.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inovandudza "Carpool Karaoke" uye pachave nemwaka wechipiri